Fiatoana - Victor Mochere
Fialana amin'ny Victor Mochere
Ny fampahalalana rehetra ato amin'ity tranonkala ity dia navoaka tamim-pinoana tsara ary ho an'ny fampahalalana ankapobeny fotsiny. Victor Mochere tsy manao antoka momba ny fahafenoana, ny fahamendrehana ary ny fahamarinan'ity fampahalalana ity. Azafady, mariho fa:
A. Ny votoatin'ity tranonkala ity dia natao ho an'ny tanjona fampahalalana fotsiny
B. Ny hetsika rehetra ataonao amin'ny fampahalalana hitanao ato amin'ity tranonkala ity, dia mety amin'ny loza mety hitranga aminao
C. Victor Mochere dia tsy manaiky na inona na inona tompon'andraikitra amin'ny fatiantoka na fahasimban'ny olona na vatana noho ny fampahalalana omena eto amin'ity tranokala ity na tranokala mifandray
D. Victor Mochere dia tsy manome toro-hevitra amin'ny alàlan'ny fanomezana fampahalalana amin'ny alàlan'ity tranokala ity
E. Ny fampahalalana ao amin'ity tranonkala ity dia omena amin'ny alàlan'ny fandraisan'anjaran'ireo olona ao amin'ny tranonkala ny andraikitra amin'ny fanombanana ny maha-zava-dehibe sy marina ny votoatiny
F. Ny rohy mankany amin'ireo tranonkala hafa dia ampidirina mba hahazoana tombony ary tsy manohana ny fitaovana rehetra mety ao amin'ireo toerana ireo; Na izany aza dia tsy andoavam-bola ny fikambanana, vokatra na serivisy mifandraika amin'izany
Avy amin'ity tranokala ity dia afaka mitsidika tranokala hafa ianao amin'ny alàlan'ny fanarahana rohy hyperlink amin'ny tranokala ivelany toy izany. raha Victor Mochere Miezaka manome rohy manara-penitra fotsiny amin'ny tranokala mahasoa sy etika, tsy manana fifehezana ny atiny sy ny toetoetran'ireo tranonkala ireo izahay. Ny tompon'ny tranokala sy ny atiny dia mety hiova tsy misy fampandrenesana ary mety hitranga aloha Victor Mochere manana fahafahana hanala rohy izay mety ho lasa 'ratsy'. Azafady, fantaro ihany koa fa rehefa miala amin'ity tranokala ity ianao, dia mety manana politikam-piainan'ny tena manokana sy fepetra hafa ankoatra izany ny tranokala hafa Victor Mochereny fanaraha-maso. Azafady aza hadino ny manamarina ny politikan'ny tsiambaratelon'ireo tranokala ireo ary koa ny "Fepetra momba ny serivisy" alohan'ny hidirany amin'ny raharaham-barotra na hampiditra vaovao.
Amin'ny fampiasana an'ity tranonkala ity, dia manaiky ity fanapahan-kevitra ity ianao ary manaiky ny fepetrany.